Karen Community Association UK: November 2011
Fighting continues in northern Myanmar
ဦးသိန်းစိန်၏ အမေးအဖြေနှင့် ၈၈မျိုးဆက် ဦးကိုကိုလေ...
Karen people cautious, but hopeful KNU talks will ...
Informal Talks Yield No Ceasefire With Karen Rebel...
အမျိုးသားလွှတ်တော် ကြံ့ဖွံ့အမတ် ဦးခင်ရွှေရတဲ့ ဒေါက်တ...
မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာရေး နှိပ်ကွပ်မှု CSW လွှတ်တော်မှာ ...
There are real signs of change in Burma
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် KNU နှင့် အစိုးရကိုယ်စားလှယ် ထ...
နောက်ကျန် ရခိုင်- ကရင် ရဲဘော်သုံးဦး အိန္ဒိယ ထောင်ထ...
နယူးဇီလန်က ဆိုင်ကယ်သရဲများ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ...
KNU Head for Peace Table
ဗိုလ်မှူးစောဘိ၏ DKBA တပ်ဖွဲ့ ကေအဲန်ယူအဖြစ်သာ ရပ်တည်...
KIA မှာ အသုံးပြုခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ ဓာတုလက်နက်...
ယာယီအတိုက်အခိုက်ရပ်စဲသည့်နေ့က ကျဆုံးသော ရဲဘော်သို့...
ENC မှ ကြံဖွံအစိုးရကို နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှူ စတင်ရ...
တိုင်းရင်းသားအရေး တိုးတက်ဖို့ လိုသေးတယ်လို့ ကုလကို...
Posted by KCA.UK at 22:210comments
ဦးသိန်းစိန်၏ အမေးအဖြေနှင့် ၈၈မျိုးဆက် ဦးကိုကိုလေး၏သဘောထား
Posted by KCA.UK at 11:190comments
November 27 |Author: Ehna- Karen News
The Karen people are hopeful, yet cautious about the recent informal meeting between the Karen National Union and the Burmese government’s ceasefire talks.
The KNU which has been lock inacivil war withaseries of military governments for the 62 years, last Saturday and Sunday held informal talks with Burma government representatives led by Railway Transport Minister, U Aung Min in Thailand.
KNU representatives led by General Mutu Say Poe (Deputy Head of KNU Emergence Peace Committee), Padoh Saw David Taw (Secretary of the KNU Emergence Peace Committee) and Padoh Saw Ah Toe met with government representatives led by Railway Transport Minister, U Aung Min.
Padoh Saw David Taw told Karen News.
“This isatalk for talk – meaning the meeting was onlyainformal talk with government representatives. He said U Aung Min agrees to hold formal talk with the KNU in Pa-an. The KNU did not reach any agreement, and has yet to decide if it will meet for further talks.”
The KNU meetings with the government generated widespread interest and hopes ofapositive outcome for Karen people.
Saw Samual Moo,aschoolteacher, from Mawlichai village, on Thai-Burma border of Tak province, told Karen News,
“We want the KNU to hold peace talk. The people want peace.”
Saw Samual Moo from Taw Oo Hta village, fled his village more than four years ago taking refugee in Thailand.
Naw Ler,aKaren woman who left her home 14-years ago and is nowarefugee in Bong Ti village, southern Thailand said.
“Nobody wants to stay forever in Thailand, we hope for peace. Aung San Suu Kyi is already negotiating with the government, but the KNU is still behind.”
As hopeful as they are for peace Karen people spoken to for this article said they are also cautious about the peace talks.
Saw Samual Moo explained.
“I want the [KNU] to hold serious peace talks. I wantapeace that is stable, because we have had to flee from our homeland and hide for many years. I want to go back to my home. I don’t want peace that can be broken easily and we have to run again. We don’t know if the government peace offer is genuine or not. The KNU needs to be careful in their approach and negotiations. We want an outcome that benefits Karen people.”
Naw Ler said she did not wantaceasefire that is not followed through with genuine peace.
“We don’t want to see the situation collapse like the last ceasefire that was led by Gen Bo Mya but was not successful.”
Naw Paw,aKaren refugee living in Mae La refugee camp in Thailand said.
“I don’t trust the government, but if both sides are willing to talk it isagood start. We want our rights, education, security,aright to earn our living freely when we return to Burma. We don’t want to return and still face oppression and have to run away again within two or three years.”
Naw Paw left her village in Karen State 15-years ago.
“I wantameaningful dialogue. We’re fed up staying as refugees inaforeign country.”
According to Pado Saw David Taw, the government representatives outlined their positions at the recent meeting – cease hostilities, set up liaison offices, both sides informing each other when carrying arms and traveling through each other’s respective controlled areas.
According to the KNU’s Padoh Saw David Taw, the government indicated that they want to hold further talks in Pa-an to discuss political issues.
Padoh Saw David Taw said, that apart from talking about the ceasefire, the KNU also raise for discussion issues such as villagers livelihoods, rehabilitation, education, health, landmine issues, concerns about the Burma Army setting up camps near villages. U Aung Min said these issues could be discussed in further formal talks and only if both sides reachaceasefire.
Padoh Saw David Taw said the KNU presented to U Aung Min that the KNU would like to include representatives from districts and brigades to hear and observe in the formal talks.
Minister U Aung Min, as well as meeting with the KNU also met with the Shan State Army-South, the Chin National Front (KNF), Kachin Independence Organizaton (KIO), and Karenni National Progressive Party (KNPP).
Padoh Saw David Taw said the SSA-South Led by Lt-General Yawdserk reachedaceasefire fire agreement with the government and will signaformal ceasefire with the government in December, while the CNF agreed to hold formal talks with the government in January in Hahka.
According to Shan Herald Agency for News, the SSA-South positions on the ceasefire are – cessation of hostilities, political negotiations, setting-up ofaSpecial Development Zone, and cooperation in drug eradication.
Posted by KCA.UK at 23:240comments
Informal Talks Yield No Ceasefire With Karen Rebels
Friday, November 25, 2011 Irrawaddy
KNU General Secretary Zipporah Sein
The Karen National Union (KNU) recently formed the “Committee for the Emergence of Peace” with the aim of holding peace talks with the Burmese government. On Nov. 19, soon after the committee was formed, three of its representatives held talks in northern Thailand withaBurmese government delegation led by Minister Aung Min. Saw Yan Naing,asenior reporter for The Irrawaddy, interviewed KNU General Secretary Zipporah Sein after the meeting.
Question: What was the result of the meeting between members of the KNU’s Committee for the Emergence of Peace and the Burmese government delegation?
Answer: We do not have any results yet, because we haven't had substantial talks yet. It was only an informal meeting and discussion. We haven't reached any agreement yet.
Q: Why were all seven members of the Committee for the Emergence of Peace not involved in the meeting with the delegation led by Aung Min? Are there disagreements within the KNU leadership regarding the peace talks?
A: It was not necessary for all seven members to get involved in this meeting. It is the beginning. So the Committee members elected to send only three representatives to participate in the meeting. These negotiations are complicated, so of course there are differences of opinion regarding strategies. However, we have come to an agreement within our leadership and we are ready to go forward with talks.
Q: Witnesses to the meeting said the KNU representatives didn’t signed any ceasefire agreement in the meeting, but agreed in principal toaceasefire with the government. Is this true?
A: Actually, that is not true. The meeting was informal and there was only informal talk. Nothing came out about any agreement yet. The agreement can only happen after we have more substantial talks.
Q: There is speculation that some KNU hardliners and some pro-KNU persons were not happy about the recent peace talks, which were led by KNU Central Committee member Saw David Taw. Is that true?
A: Everybody made the decision to establishaCommittee for the Emergence of Peace together at the recent meeting of the KNU Central Standing Committee and everyone is satisfied with the outcome of the meeting to start negotiations for peace talks or ceasefire talks. David Taw and the team were appointed to go to this informal meeting with the representative of the government of Thein Sien by the Committee for Emergence for Peace. The KNU already hasaclear policy regarding negotiations to resolve political problems and opening the door to talks. The KNU has always been willing to participate in solving political problems in Burma to bring peace and equal rights for all.
Q: Harn Yawnghwe, the executive director of the Brussels-based Euro-Burma
Office who also is one of Burma’s most prominent exiles, was also present at
the recent talks. What was his role?
A: I think he is the advisor of the Ethnic Nationalities Council. He is willing to recognize equal rights for all ethnic nationalities for Burma.
Q: Burma’s President Thein Sein told Burmese journalists in Bali this month
that it is hard to meet with all ethnic armed groups together at the same time because they have different demands. What is your response to that?
A: We ethnic people all need equal rights and equal participation.
This is our common goal, so that is why we encourage Thein Sein’s government to meet with all the ethnic groups together.
Q: Is it necessary that Aung San Suu Kyi get involved in the government’s
peace process with the ethnic armed groups?
A: I think it is good for her to get involved as she is one of the dialogue partners and we all agree that tripartite dialogue which is all inclusive is the best way for all of us, so it is important that Aung San Suu Kyi participates in this process.
Q: What is the KNU’s current position on peace talks with the government? What
kind of peace talks do the KNU want?
A: The KNU is committed toagenuine ceasefire, but to succeed we have to proceed with caution and we want to be recognized as equal partners in this dialogue and end up withapolitical agreement and settlement that will bring genuine peace and stability to Burma.
Posted by KCA.UK at 11:500comments
အမျိုးသားလွှတ်တော် ကြံ့ဖွံ့အမတ် ဦးခင်ရွှေရတဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ အတုဖြစ်နေ
ဇေကမ္ဘာ ကုမ္ပဏီပုိုင်ရှင် ဦးခင်ရွှေ ကြီးပွားချမ်းသာလာခြင်းဟာ စစ်အစိုးရက သူကောင်းပြုတဲ့ စီမံကိန်းတွေနဲ့ ခေတ်ပျက်သူဌေးဖြစ်ပြီး ချမ်းသာလာသူ ဖြစ်ပါတယ်။
နအဖ န၀တ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် ကျေးဇူးကြောင့် ချမ်းသာလာတဲ့ ဦးခင်ရွှေကုို စစ်အစိုးရကလည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန် အသုံးချခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၇ ခုနှစ် အမေရိကန်ဆန်ရှင်ခေါ် စီးပွားရေး ပိတ်ဆုို့မှုကြောင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ အလူးအလဲ ခံနေရချိန်မှာ အမေရိကန်စီးပွားရေး ပိတ်ဆုို့မှုပြန်ဖွင့်ရေး၊ နုိုင်ငံတကာမှာ စစ်အစိုးရ သိက္ခာပြန်တင်နုိုင်ရေးအတွက် အမေရိကန် Public Relations ကုမ္ပဏီတွေကုို ဇေကမ္ဘာကုမ္ဗဏီပုိုင်ရှင် ဦးခင်ရွှေကတဆင့် ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်အစောပုိုင်းကစပြီး Jafferson Waterman International ဆုိုတဲ့ ကုမ္ပဏီကုို တနှစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ သိန်းနဲ့ စစ်အစိုးရက ငှားပီး လော်ဘီလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီနောက်မတော့ Bain & Associates ကုမ္ပဏီကုို တနှစ် ဒေါ်လာ ၂ သိန်းခွဲကျော်ပေးပီး ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီပုိုင်ရှင် ဦးခင်ရွှေ ကတဆင့် ငှားခဲ့ပါတယ်။ ဒါလည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီနောက် Atlantic Group ကုမ္ပဏီကုို ဒေါ်လာအမြောက်အများပေးငှားပေမဲ့လဲ စစ်အစိုးရ သိက္ခာတက်မလာခဲ့ပါဘူး။ ဒိနောက် ၂၀၀၂ ခုမှာ DCI Group ဆုိုတဲ့ အမေရိကန် ကုမ္ဗဏီကုို ရှစ်လတွက် ဒေါ်လာ ၃ သိန်းခွဲနဲ့ ငှားခဲ့ပေမဲ့ နောက်ဆုံး ဒီကုမ္ပဏီနဲ့လည်း စစ်အစိုးရ ခွာပြဲခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေတွေကုိုကြည့်ရင် ဦးခင်ရွှေဟာ စစ်အစုိုးရလက်ထက်ကထဲက ဘယ်လောက် အတိုင်အတာထိ အရေးပါနေသလဲ သိသာပါတယ်။
အမေရိကန် ဆန်ရှင်ပြန်ဖွင့်နိုင်ရေး၊ နုိုင်ငံတကာမှာ စစ်အစိုးရ သိက္ခာတက်လာရေး စီမံကိန်းကို တချိန်က OSS ထောက်လှမ်းရေး စစ်ဗိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာမုို့ ဦးခင်ရွှေဟာ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က လက်ရင်းထား အားကုိုးခံခဲ့ရသူ လုပ်ငန်းရှင်ကြီး တဦးဆုိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဒီစီမံကိန်းသာေ အာင်မြင်ခဲ့ရင် ဦးခင်ရွှေဟာ ဒီထက်ပြုိုပီး သူကောင်းပြုခံရမှာ ဧကန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီစီမံကိန်းကုို အနောက်နုိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းတွေက ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဦးခင်ရွှေပါ စစ်အစိုးရနဲ့အတူ ရောပြီး သိက္ခာကျခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လက်ထက်က ဦးခင်ရွှေကို သုံးပြီး အမေရိကန်ကို လိမ်ဖို့ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က ကြိုးစားခဲ့တာတွေကို အမေရိကန်မှာ နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်ရသွားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း ဗိုလ်မှူး အောင်လင်းထွဋ်ကလည်း ခုထိ ဖော်ထုတ်ခြင်း မပြုဘဲ ငြိမ်နေပါတယ်။
ဦးခင်ရွှေ ဒေါက်တာဘွဲ့အတု ဘယ်လုိုရသလဲ
စစ်အစိုးရဟာ တဘက်က ဦးခင်ရွှေကုို အသုံးချပီး အမေရိကန် PR ကုမ္ဗဏီတွေနဲ့ သိက္ခာတက်အောင် ကြိုးစားနေချိန်မှာ တဘက်ကလည်း ဦးခင်ရွှေကုို ဒေါက်တာဘွဲ့တစ်ခု ရအောင် ဖန်တီးပေးပီး PR ကမ်ပိန်း အရှိန်ရအောင် ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်လုို့ ဦးခင်ရွှေရတာ ဒေါက်တာဘွဲ့အတုဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်တွေဘက်က မြင်ပါတယ်။
ဦးခင်ရွှေဟာ စစ်အစိုးရ သိက္ခာတက်ရေးအတွက် Bain & Associates ကုမ္ပဏီနဲ့ အလုပ်များနေတုံးမှာ ဦးခင်ရွှေကုို အမေရိကန်နုိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်က ပေးအပ်တဲ့ Business Administration ဆုိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ ချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနားလုပ်တဲ့အကြောင်း စစ်အစိုးရသတင်းကုို ကုိုးကားပြီး အမေရိကန် Washington Post သတင်းစာက ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနုိုင်ငံက ကောလိပ် တက္ကသိုလ်တွေကုို ပိတ်ထားတာ တနှစ်ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာ စစ်အစိုးရက ဦးခင်ရွှေသတင်းကုို ထုတ်ပြန်လုိုက်လုို့ ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီရေး မြန်မာအတုိုက်အခံတွေလဲ အံ့အားတသင့် ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
စစ်အစိုးရ သတင်းစာတွေအရဆုိုရင် ဦးခင်ရွှေကုို ဒေါက်တာဘွဲ့ပေးတဲ့အခမ်းအနားမှာ အမေရိကန်ပညာရေး ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ရဲ့ ကမကထနဲ့ ၀ါရှင်တန် တက္ကသုိုလ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Carey Rosenthal နဲ့ ၀ါရှင်တန် တက္ကသိုလ် ဂုဏ်ထူးဆောင် သုတေသန ကော်မီတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ Jom Lim တုို့ကနေ ပေးအပ်ခဲ့တာလုို့ ဆုိုပါတယ်။
တကယ်တော့ ဦးခင်ရွှေဟာ စစ်တပ်ကနေ တပ်ကြပ်ကြီးအဆင့်က အငြိမ်းစားယူခဲ့သူဖြစ်ပီး အတန်းပညာ အထက်တန်းတောင် မအောင်ခဲ့ဘူးလို့ အမေရိကန် သတင်းစာတွေက ရေးပါတယ်။
မှောင်ခို ဒေါက်တာဘွဲ့အတုဆိုတာ ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီ
ဦးခင်ရွှေရဲ့ ဒေါက်တာဘွဲနောက်ကြောင်းကုို အမေရိကန် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရာမှာ-
၁။ ဦးခင်ရွှေကုို ဒေါက်တာဘွဲ့ပေးတဲ့ အမေရိကန်နုိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်တက္ကသုိုလ်ဆုိုတာ အသိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ တက္ကသုိုလ်မဟုတ်ဘဲ ဟာဝုိုင်အီကျွန်းမှာ မှတ်ပုံတင်ထားပီး ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ် Bryn Mawr မှာ စာတုိုက်သေတ္တာနံပတ်တခုနဲ့ ဘွဲ့တွေ ရောင်းစားနေတဲ့ တက္ကသုိုလ်အတု ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒေါက်တာဘွဲ့တခုကုို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၆၀၀ ကနေ ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ ကြားဈေးနဲ့ မှောင်ခိုရောင်းနေတဲ့ တက္ကသိုလ်အမည်ခံ မှောင်ခိုလုပ်ငန်းတခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဒါပေမဲ့ ဦးခင်ရွှေကုို မှောင်ခုို ဒေါက်တာဘွဲ့အတုရောင်းတဲ့ တကယ်မရှိတဲ့ နာမယ်တူ ၀ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ သတင်းကြောင့် အမေရိကန်နုိုင်ငံ St. Louis မှာတကယ်ရှိတဲ့ ၀ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်က ကြားကနေ အချောင် နာမယ်ပျက်သွားပါတယ်။ ဒီမှာတင် အမှန်တကယ် တည်ရှိတဲ့ St. Louis ၀ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်က ဦးခင်ရွှေ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ ရတယ်ဆုိုတဲ့ စစ်အစုိုးရသတင်းဟာ မှားယွင်းကြောင်းနဲ့ အထင်လွဲစရာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြောင်းကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ြပီး တရားစွဲဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
(ပင်ဆယ်ဗေးနီးယား အခြေစိုက် စီးပွားဖြစ်လုပ်စားနေတဲ့ ၀ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်အတုကို St. Louis ၀ါရှင်တန်တက္ကသိုလ် အစစ်ကနေ ဦးခင်ရွှေကို ပေးတဲ့ဘွဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Federal District တရားရုံးကနေ တရားစွဲခဲ့ရာမှာ နောက်ဆုံး တရားရုံးပြင်ပမှာ ကျေအေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာတိုက်ပုံးတစ်လုံးနဲ့ မှောင်ခို ဒေါက်တာဘွဲ့တွေ ရောင်းစားနေသူတွေအနေနဲ့ တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အရ နောက်နောင် ၀ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်အစစ်နဲ့ တခြားအမေရိကန်တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ အမည်သုံးပြီ်း စီးပွားမလုပ်နိုင်အောင် ဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပါတယ်)။
၃။ ဦးခင်ရွှေကုို မှောင်ခုိုဒေါက်တာဘွဲအတုပေးတဲ့ အမေရိကန်ပညာရေး ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ဆုိုတာ စင်္ကာပူနုိုင်ငံမှာသာ အခြေစုိုက်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
၄။ စစ်အစုိုးရသတင်းစာပါ ဦးခင်ရွှေကုို ဒေါက်တာဘွဲ့အတုပေးတဲ့ ၀ါရှင်တန် တက္ကသုိုလ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Carey Rosenthal ဆုိုတာလဲ အမေရိကန်နုိုင်ငံ Philadelphia မှာရှိတဲ့ Drexell တက္ကသိုလ်က ဓါတုဗေဒ ပါမောက္ခဖြစ်နေတာ တွေ့ရပြီး ဦးခင်ရွှေဘွဲ့ပေးဖို့ သူမြန်မာနုိုင်ငံသွားတဲ့စရိတ်ကုို ဦးခင်ရွှေကပဲ စိုက်ထုတ်ကျခံတယ်လုို့ သိရပါတယ်။
၅။ တကယ်တော့ ဦးခင်ရွှေရတယ်ဆုိုတဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ဆုိုတာ ဘွဲ ဒီဂရီ ပေးခွင့်မရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုက ပေးတဲ့ မှောင်ခုိုဒေါက်တာဘွဲ့အတုသာဖြစ်ပီး ဒေါက်တာဘွဲပေးတဲ့ ဖြစ်စဉ်တခုလုံးရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေကို ဦးခင်ရွှေကဘဲ အကုန်အကျခံတာ ပေါ်လွင်နေတယ်လုို့
Posted by KCA.UK at 09:230comments
တပ်မတော်စည်းကမ်းရှိမှ ရုရှားမှာ နေခွင့်ရမည်.. (ရုရှားမှစစ်ဗိုလ်များ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ နေထိုင်မှုကြောင့် အဆောင်မှနှင်ထုတ်မည့် အခြေအနေအား ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး၏ လျှို့ဝှက် သတိပေးချက်)
Tuesday, October 25, 2011 ဒီမိုဝေယံ
၂၀၁၀စက်တင်ဘာလ ၈ရက်နေ့က မြန်မာစစ်ဗိုလ် ကျောင်းသား ၅၁ဦးအဖွဲ့ မော်စကိုမြို့ရှိ MSTU ကျောင်းသို့ ရောက်ရှိလာစဉ်..
ရုရှားမှ မြန်မာစစ်ဗိုလ်များရဲ့ ၂၀၁၀ ပြည်ထောင်စုနေ့က မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန် သရုပ်ပြပွဲ..
ရုရှားမှ နောင်တခေတ်ရဲ့ အောင်စစ်သည်များ စည်းမဲ့၊ ကမ်းမဲ့ စည်းပျက်၊ ကမ်းပျက် နေထိုင်မှုကြောင့် အဆောင်မှ ထွက်ပေးရန် တောင်းဆိုခံရမှုနှင့် ၂၀၁၀သြဂုတ်လက ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး၏ လျှို့ဝှက် သတိပေးချက်တဲ့ဗျို့...
၂၀၁၀ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက ရုရှားမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားမှာ တွေ့ရတဲ့ သံအမတ်ကြီး ဦးမင်းသိန်း (ဝဲ-ဒု)
၁၆ သြဂုတ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်က ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမင်းသိန်း၏ လျှို့ဝှက် သတိပေးစာ
Posted by KCA.UK at 13:470comments
မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာရေး နှိပ်ကွပ်မှု CSW လွှတ်တော်မှာ ထွက်ဆို
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ချင်းပြည်နယ်တွင်းက ခရစ်ယာန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွေကို ခုတ်လှဲဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ချင်းအမျိုးသားပါတီက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ စုပေါင်း လက်မှတ် ထိုးပြီးတော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို တိုင်ကြားနေချိန်မှာပဲ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အောက်လွှတ်တော်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးရာ ဆပ်ကော်မတီ ကြားနာပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘာသာရေး ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကြောင့် စီပီစီလို့ခေါ်တဲ့ အထူးစိုးရိမ်ဖွယ်နိုင်ငံစာရင်းမှာ CSW လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ကြီးက ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်ခင်မျိုးသက်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်သံဃာ့အရေးအခင်းက ဦးဆောင်သံဃာတပါးဖြစ်တဲ့ အရှင်ဂမ္ဘီရ အပါအ၀င် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေကို ဆက်ပြီးအကျဉ်းချထားတဲ့အပြင် မွတ်စလင်နဲ့ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေကို ဆက်လက်ဖိနှိပ်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ကြာသာပတေးနေ့ အမေရိကန် အောက် လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာ အာဖရိက ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီ ကြားနာပွဲမှာ CSW ခရစ်ယာန်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တာဝန်ခံ Benedict Roger က ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ အရှင်ဂမ္ဘီရအပါအ၀င် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး အများအပြား အခုထိ အကျဉ်းချခံနေကြရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မွတ်စလင်၊ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေကလည်း အခုထိမပြောင်းလဲသေးပါဘူး။ နောက် ကချင်ပြည်နယ်က ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေ အများအပြားရှိတဲ့ ဒေသတခုဖြစ်ပြီး အဲဒီနေရာကို ကျနော် ခဏခဏရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမှာ မြန်မာစစ်တပ်က ထိုးစစ်အသစ်ဆင်နေတဲ့အတွက် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေကို ဖျက်ဆီးတာတွေအပြင် ဘာသာရေးလွပ်လပ်ခွင့်မရဘဲ ကန့်သတ် ပိတ်ပင်မှု အမျိုးမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ တွေ့ရပါတယ်”
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်ရာ ကချင်၊ ကရင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာ တိုင်းရင်းသား ဒေသခံတွေဟာ စစ်တပ်နဲ့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကို ခံနေရချိန်မှာပဲ ချင်းပြည်နယ်၊ ကန်ပက်လက်မြို့၊ မုံးချောင်းတံတားမှာ စိုက်ထူထားတဲ့ ခရစ်ယာန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွေကို ခုတ်လှဲဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံတွေမကျေနပ်တဲ့အတွက် စုံစမ်းဖြေရှင်းပေးဖို့ ချင်းအမျိုးသားပါတီက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ စုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးပြီး နိုဝင်ဘာ ဒုတိယပတ်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ မေတ္တာရပ်ခံ တိုင်ကြားမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ခရစ်ယာန်အပါအ၀င် မွတ်စလင်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေပါ ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှု အများအပြားကို ခံနေရတာမို့ အမေရိကန် အစိုးရဘက်က ဆက်လက်ပြီး ဖိအားပေးဖို့လည်း တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ မြန်မာအစိုးရက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူတွေကို ဆက်ပြီး ဖမ်းဆီးထောင်ချ ထားမယ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကို ဆက်ပြီးတော့ တိုက်ခိုက်နေမယ်၊ ဘာသာရေး ဖိနှိပ် ချိုးနှိမ်မှုတွေ လုပ်နေမယ်ဆိုရင် မြန်မာအာဏာရှင်တွေကို အမေရိကန်အစိုးရက ဆက်ပြီးတော့ ဖိအားပေးဖို့ လိုသလို CPC နိုင်ငံအဖြစ် ဆက်ပြီးသတ်မှတ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်”
အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ၁၃ ကြိမ်မြောက် ဘာသာရေးလွပ်လပ်ခွင့် အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပြီး ဒီအထဲမှာ မြန်မာ၊ တရုတ်၊ အီရန်၊ မြောက်ကိုးရီးယား အပြင် ဆူဒန်နဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတွေကိုပါ CPC လို့ခေါ်တဲ့ အထူးစိုးရိမ်ရတဲ့ နိုင်ငံတွေစာရင်းမှာ ထည့်သွင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 09:560comments
Andrew Mitchell, International Development Secretary.
Never meet your heroes, the adage goes. But that was proved wrong for me on Thursday morning when I met Aung San Suu Kyi in Burma.
The cheering crowds thronging the road to the school we visited were testament to the reverence in which she is held across the country.
Generations of families were there to see and hear the 'beloved daughter of Burma', the woman who represents their hopes and their dreams for the future.
She has paidaheavy price: under house arrest for years; separated from her children; prevented by the regime from visiting her dying husband; yet she shrugs off her own suffering. She is an inspiration.
This has been an extraordinary visit in so many ways. Just months ago, the idea ofaBritish Cabinet Minister makingajoint public visit with Aung San Suu Kyi would have been unthinkable. There are real – if tentative – signs of change in Burma.
A year after Miss Suu Kyi's release from house arrest,anew president has opened upaprocess of reform: relaxing media censorship, releasing some political prisoners, openingaformal dialogue with Miss Suu Kyi, and changing the election laws which are designed to enable her National League for Democracy to stand for office.
For those of us who have followed Burma closely for the last two decades, it is impossible not to feel some stirrings of hope for the country.
But we are only at the beginning of this road. Hundreds of political prisoners languish in jail. Bitter conflict still rages in the ethnic border areas, and we hear credible reports of serious human rights abuses by the Burmese army. The conflict has broughtahumanitarian crisis in its wake. There are disturbing rumours of military collaboration with North Korea.
Earlier this week I met the Burmese president and other senior ministers. And my message to them was clear and simple. Britain welcomes the progress which has been made; but we must see further urgent change. The release of all remaining political prisoners, including the charismatic pro-democracy activist Min Ko Naing, whom I met on my last visit in 2007. Free and fair by-elections. A genuine ceasefire, respect for human rights and credible efforts towards national reconciliation in the border areas, with immediate humanitarian access. A commitment to the military moving to their proper place in society: under the control of legitimate, elected civilian politicians.
As fundamental changes happen, Britain stands ready to respond withafundamental shift in our relationship with Burma, including movement on sanctions, trade, aid and development programmes, investment, and restrictive measures.
I was askedanumber of times on my visit how long I think the reform process will take to complete. The answer to that is clear: it is up to the President and his men. If Aung San Suu Kyi and Burmese democrats continue to believe that reform efforts are genuine and enduring, we in Britain and the international community will respond in an appropriate manner. For Burma this could genuinely beabright new dawn.
Posted by KCA.UK at 09:460comments
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် KNU နှင့် အစိုးရကိုယ်စားလှယ် ထပ်တွေ့မည်
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနိုင်ရေးအတွက် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU)နှင့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ ပဏာမထပ်မံတွေ့ဆုံမှုကို လာမည့် ၁၉ ရက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းရိုင်ခရိုင် မယ်ဆိုင်မြို့တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ KNU ဗဟိုကော်မတီဝင်များ (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
ထို တွေ့ဆုံပွဲတွင် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို မီးရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုး၊ ပဒိုဒေးဗစ်ထောနှင့် ပဒိုစောအားတိုး တို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း KNU က ပြောသည်။
KNU သည် မြန်မာအစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန်အတွက် နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်က အဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးပါရှိသည့် ပြည်တွင်း
ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီ ကို ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည်။
ယင်းအဖွဲ့သည် အစိုးရနှင့်တွေ့ဆုံမည့် KNU ကိုယ်စားလှယ်များကို ကြီးကြပ်မည်ဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးမည့် ကိုယ်စားလှယ်များကို လည်း ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်မည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်ဟု KNU ဒု ဥက္ကဌ ပဒို ဒေးဗစ် သာကဘော က ပြောပြသည်။
၎င်းက“အခုထပ်တွေ့တာ အလွတ်သဘော တွေ့တာပဲဖြစ်တယ်၊ တကယ် ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါကျရင် KNU အနေနဲ့တပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး၊ တိုင်းရင်သားဒေသတွေမှာ ထိုးစစ် ရပ်ဆိုင်းရေးနဲ့၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီးရင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို သွားမယ့် တောင်းဆိုချက်တွေကို တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများကိုလည်း KNU အပါအ၀င် အမာခံ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့ အပါအ၀င် ဆက်စပ် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့နှင့် ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းက ဖွဲ့စည်းထားသည့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့အနေနှင့်သာ ဆွေးနွေးနိုင်မည်ဟုလည်း ပဒို ဒေးဗစ် သာကဘော က ဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် မြန်မာအစိုးရက စေလွှတ်သည့် မီးရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့သည် ယခင်လ ၉ ရက်နေ့က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့တွင် KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ပဏာမ အလွတ်ဆွေနွေးပွဲတရပ်ကို ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသေးသည်။
KNUအဖွဲ့သည် အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေးအတွက် ၁၉၄၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့မှစတင် ကာ အစိုးရ အဆက်ဆက်ကို ဆန့်ကျင် တော်လှန်ခဲ့သည်မှာ (၆၂) နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
Posted by KCA.UK at 00:120comments
နောက်ကျန် ရခိုင်- ကရင် ရဲဘော်သုံးဦး အိန္ဒိယ ထောင်ထဲမှ လွတ်မြောက်လာ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တား အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြေက်လာသည့် ရခိုင်ကရင် ရဲဘော် ၃၄ ဦးထဲမှ မလွတ်ဘဲကျန်ရှိလိုက်သည့် ရဲဘော် ၃ သုံးဦး ယမန်နေ့က အပြီးအပိုင် လွတ်မြောက်လာပြီ ဖြစ်သည်။
ယခု လွတ်မြောက်လာသည့် ရဲဘော်သုံးဦးမှာ ရခိုင်အမျိုးသား လူလူ၊ ဟေးလီနှင့် ကရင် အမျိုးသား မောင်နိုင်တို့ ဖြစ်သည်။
ပထမ အသုတ် (၃၁ ) ဦး ထောင်မှ လွှတ်မြောက်လာစဉ်။
သူတို့ ၃ ဦး လွတ်မြောက်လာသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုဓညလင်းက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
" သူတို့ မနေ့က နံနက်ပိုင်းက လွတ်တယ်။ သူတို့ကို ကာလကတ္တားကနေ အမူစစ်ဖို့ ပို့ပလေယားကို ဒီလ ၉ ရက်နေ့က ပို့လိုက်တယ်။ ပို့ပလေးယား ၁၄ ရက်နေ့က ရောက်သွားတယ်။ သူတို့ တရားရုံးကို သွားတယ်။ အဲဒီမှာ တခါတည်းလွတ် လိုက်တာ။ အမှန်က သူတို့ရုံးချိန်းက ၁၈ ရက်နေ့မှ ဆိုတော့ လွတ်ရမှာ အဲဒီနေ့မှ လွတ်ရမှာ အခု တော့ စောစောစီးစီး လွတ်ပေး လိုက်တယ်။"
ယခုလွတ်မြောက်လာသည့် ၃ ဦးမှာ ပို့ပလေးယားကျွန်းတွင် အကျဉ်ချုပ်နှင့်နေရစဉ် အိန္ဒိယ ရဲတပ်သား တဦးနှင့် စကားများခဲ့သဖြင့် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည့် အတွက် ယခုကဲ့သို့ ထောင်မှ မလွှတ်ဘဲ ကြန့်ကြာ နောက်ကျ နေခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကိုဓည လင်းက ဆက်ပြောသည်။
"ကျွန်တော်တို့ ပို့ပလေးယားမှာ ရှိနေတုန်းက သူတို့နဲ့ အစောင့်ပုလိပ်တဦးနဲ့ စကားများကြတယ်။ ရန် ဖြစ်တဲ့အဆင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စကားများကြတဲ့အဆင့်ပါ။ ဒါကို ပုလိပ်က အမြင်ကပ် ပုဒ်မနဲ့ တရားစွဲ တာမျိုးပါ။ ဥပမာ တာဝန်ချိန်မှာ နှောင့်ချက်တဲ့ အမူ၊ ၀တ္တရားနှောင့်ချက်မှုနဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ အတွက် သူတို့ နောက်ကျ ကျန်ခဲ့တာပါ။"
အခုအခါ သူတို့သုံးဦးမှာ ပို့ပလေးယားကျွန်းတွင်ရှိနေပြီး မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း နယူးဒေလီသို့ ပို့ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
" သူတို့ကို ဒီနယူးဒေလီကို ပို့မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူ နေထိုင်မှာပါ။ ဒီမှာ နေထိုင်ရေးကတော့ ကျပ်တည်း ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေကြရမှာပါ။ အခုတော့ UNHCR ကတော့ အကူအညီ ပေးထားပါ တယ်။ ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ ကူညီးပေးဖို့ဆိုပြီးသူတို့ပြောထားတယ်။ ဒီနှစ်ကုန်ရင်တော့ နောက်နှစ် အ တွက် မသေချာသေးဘူး သူတို့မှာ ဘတ်ဂျက် မရှိသေးဘူးလို့ပြောတယ်။ အခုတော့ UNHCR အကူအညီနဲ့ နေကြပါတယ်။"
သူတို့ အထဲမှ ၃၁ ယောက်ကို ယခုနှစ် မေလ ၁၉ ရက်နေ့က ကာလကတ္တားအကျဉ်းထောင်မှ လွတ်ပေးခဲ့သည်။ ယခုခါ သူတို့မှာ ဒေလီမြို့တွင် UNHCR ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာရုံးမှ အကူအညီနှင့် နေထိုင်လျှက်ရှိသည်။
၁၉၉၈ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလက အိန္ဒိယ ထောက်လှမ်းရေးမှ အန်ဒမင်ကျွန်း ရှိ လန်းဖေါ့ ကျွန်းတွင် စစ်အခြေစိုက် စခန်း တခု တည်ဆောက်ရန် ခေါ် ယူပြီး ကျွန်းပေါ် အရောက်တွင် ရခိုင်ပြည် တပ်မတော်မှ ဗိုလ်ရာဇာအပါ အ၀င် ခေါင်းဆောင် ၆ ဦးကို အိန္ဒိယ စစ်တပ်မှ သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ကျန် ရဲဘော် ၃၄ ဦးကို အိန္ဒိယ အစိုးရမှ နှစ်ပေါင်း ၁၀ ကျော်အကြာ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရဲဘော်များမှာ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးလက်အောက်ခံ KNLA မှ ကရင်ရဲဘော်များနှင့် ရခိုင်ပြည် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးပါတီ NUPA လက်အောက်ခံ Arakan Army မှ ရဲဘော်များ ဖြစ်ကြသည်။
Posted by KCA.UK at 10:250comments
နယူးဇီလန်က ဆိုင်ကယ်သရဲများ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများအတွက်တိုက်ပွဲဝင်
Motorcycle mission for Myanmar
AWARENESS RIDE: A group of motorcyclists are riding through New Zealand to highlight the plight of border villagers in Myanmar.
Palmerston North has been made aware of the plight of the Burmese people through the rumble of motorcycle engines.
A group of motorcyclists rode into the city yesterday as part ofacampaign to raise awareness of the military crackdown on villages in the Asian nation of Burma, also known as Myanmar.
At All Saints Church last night they spoke about the situation in Burma and met members of the city's Burmese community.
Among the riders was Stu Corlett who worked for Partners Relief and Development in the regions along the border of Burma and Thailand helping those who had fled their homes. He said that in the region he worked in, Shan, four out of 100 children attended schools. There was "virtually no" medical care for the four million people in Shan.
Partners was training Burmese people to be teachers and doctors for their own people, he said.
A military junta has ruled Burma for 40 years during which time it has cracked down on minority and opposition groups.
The Partners website estimated the military had razed more than 3200 villages, displaced more than 1.5 million people and murdered innocent civilians.
Mr Corlett said Partners was working with these displaced people both inside Burma and in refugee camps in Thailand.
He said he had met one Burmese woman who said she had to run to save her life on more than 100 occasions, first in World War II and then from her own government.
Mr Corlett saidanumber of New Zealanders were part of Partners' efforts in Burma.
Kiwis hadahistory of standing up for social justice issues, he said.
More information on Partners' work can be found at partnersworld.org.nz.
Posted by KCA.UK at 10:040comments
Foreign-born Brig-Gen Saw Hsar Gay joined the Karen National Union (KNU) in 1989. Today he is the KNU’s deputy minister for foreign affairs, isacentral committee member, and heads the Special Warfare Branch for the group's military wing, the Karen National Liberation Front (KNLA).Saw Hsar Gay represented the KNU as its political representative for Portugal and Spain as far back as 1995. He served as KNU Representative for Europe in 1997 atatime when lobbying for sanctions and promoting ethnic issues to the international community was the organization's primary foreign policy objective.
He has been received in more than 20 countries by prime ministers, foreign ministers and government delegations, and has served asarepresentative not only of the KNU, but also for the exiled National Democratic Front (NDF), the Ethnic Nationalities Council (ENC) and withajoint-delegation of KNU and National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB).
He spoke recently to The Irrawaddy senior reporter Saw Yan Naing.
Question: The KNU formeda“Committee for the Emergence of Peace” earlier this month after an emergency meeting of the central committee. Why?
Answer: The recent initiative to propose peace talks and subsequent meeting with U Aung Min created the necessity to prepare for laying downapolitically coherent and coordinated body to deal with the practical, logistical and political necessities ifanew bout of talks develop.
In the past, at times there wasacertain dis-coordination and misunderstandings regarding the negotiations due to the fact that meetings and interviews were sometimes contradictory or less clear. Many people were getting involved without proper tasking and without understanding our policy, and this had to be rectified.
Posted by KCA.UK at 11:330comments
ဗိုလ်မှူးစောဘိ၏ DKBA တပ်ဖွဲ့ ကေအဲန်ယူအဖြစ်သာ ရပ်တည်သွားမည်
နိုဝင်ဘာလ ၁၄ရက်။ (ကေအိုင်စီ)
နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ ခွဲထွက်ကာ ဒီကေဘီအေအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သည့် ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကြီးငူဒေသမှ ဗိုလ်မှူးစောဘိ ဦးစီးသည့်တပ်ဖွဲ့သည် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) အဖြစ်သာ ဆက်လက် ရပ်တည်သွားမည်ဟု ယမန်နေ့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ကေအဲန်ယူ၏ ထိန်းချုပ်နယ်မြေတနေရာတွင် KNU ဖားအံခရိုင်၊ သထုံခရိုင် ဥက္ကဌများ၊ တပ်မဟာ(၁)နှင့် တပ်မဟာ(၇)မှူးများ နှင့် ဒီကေဘီအေ ဗိုလ်မှူးစောဘိတို့ မနက် ၉နာရီမှစ၍ နှစ်နာရီကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြရာမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၇) ရုံးထိုင်မှူး ဗိုလ်မှူးအယ်ဆဲဆဲက ယခုလို ပြောသည်။
“ဗိုလ်ဘိအနေနဲ့ BGF သို့မဟုတ် DKBA သို့မဟုတ် KNU အဲဒီအနေအထားထဲမှာ ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲဆိုတာ အားမနာတမ်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ ဗိုလ်ဘိကတော့ အစိုးရနဲ့လည်း ပြန်မပေါင်းချင်ဘူး။ ဒီကေဘီအေအနေနဲ့ ရပ်တည်ဖို့က လည်း ဆရာတော်(ဦးသုဇန)ကို အားကိုးလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ရှေ့ဆက်ပြီး ကေအဲန်ယူရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အောက်မှာပဲ ရပ်တည် လုပ်ဆောင်သွားတော့မယ်လို့ ပြောတယ်။”ဟု ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ ၁၄ရက်နေ့က ဒီကေဘီအေသည် ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် တပ်မှူးညီလာခံတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်မှူး ချုပ်စောလားပွယ် ဦးစီးသော ဒီကေဘီအေ ကလို့ထူးဘော ဌာနချုပ်အောက်တွင် ဗိုလ်မှူးကျော်သက်နှင့် ဗိုလ်မှူးစောဘိတို့ကို ကလို့ထူးဝါးနှင့် ကလို့ထူးလား ဗျူဟာမှူးများအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်ဟု ဒီကေဘီအေက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ မြိုင်ကြီးငူဒေသတွင် အခြေစိုက်ခဲ့သည့် နယ်ခြားစောင့်-BGF (၁၀၁၂) တပ်ရင်းမှူးဖြစ်ခဲ့သူ ဗိုလ်မှူးစောဘိသည် ယခုနှစ် မေလလောက်ကတည်းက အစိုးရကို ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၁)နှင့် တပ်မ ဟာ(၇)ဒေသများတွင် ၎င်း၏တပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား ၁၀၀ကျော်ဖြင့် လှုပ်ရှားလျှက်ရှိသည်။
Photo-KNU (ဒီကေဘီအေ ဗိုလ်မှူးစောဘိနှင့် ကေအဲန်ယူ ခေါင်းဆောင်အချို့၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ)
ယမန်နေ့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့်အထဲတွင် ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၁)မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်လင်း၊ တပ်မဟာ(၇)မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂျော်နီ၊ သထုံခရိုင် ဥက္ကဌ ပဒိုစောပန်းနု၊ ဖားအံခရိုင် ဥက္ကဌ ပဒိုစောအောင်မော်အေးနှင့် ဒီကေဘီအေမှ ဗိုလ်မှူးစောဘိတို့ ပါဝင် ခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်မှူးစောဘိက ၎င်းအနေဖြင့် ကေအဲန်ယူမှ ပေးအပ်သည့် မည်သည့်တာဝန်ကိုမဆို တပ်ခွဲမှူးဖြစ်စေ၊ တပ်ရင်းမှူးဖြစ်စေ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က ဆွေးနွေးချပြ ရှင်းလင်းခဲ့သည်ဟုလည်း သိရသည်။
သို့သော် ကေအဲန်ယူ၏ တပ်ဖက်ဆိုင်ရာ စစ်ရုံးချုပ်က ဗိုလ်မှူးစောဘိအား မည်သည့်တာဝန် ပေးအပ်မည်ကို လောလောဆယ် မသတ်မှတ်ရသေးကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ ကေအဲန်အယ်လ်အေ ထိပ်တန်းအရာရှိတစ်ဦးက ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဗိုလ်မှူးစောဘိက ၎င်း၏တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ပြန်လည်စုစည်းကာ နယ်မြေသတ်မှတ် လှုပ်ရှားရေးအတွက် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒီကေဘီအေ ကလို့ထူးဘောတပ်ဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးကြီးမိုရှေး ဦးဆောင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည် ယခုလ ၃ရက် နေ့က ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြ သော်လည်း အစိုးရအနေဖြင့် ဗိုလ်မှူးစောဘိအဖွဲ့ကိုမူ လက်ခံခြင်းမရှိသေးကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သည့် သတင်းများအရ သိရသည်။
Posted by KCA.UK at 10:300comments
KIC Tuesday, 15 November 2011-- စောဘလက်(စ်)အေဇက် ၂၅နှစ်
ကျနော့်ဇာတိက ကရင်ပြည်နယ်၊ သံတောင်ကြီးမြို့နယ် ခိုဝယ်ရွာမှာ မွေးပါတယ်။ မောင်နှမ ၅ယောက်မှာ ကျနော်က လေး ယောက်မြောက် ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်လည်း ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိ၊ နယ်မြေလည်း မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေတော့ မိသားစုရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေလည်း မကောင်းပြန်တော့ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မိသားစု စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေတဲ့အပေါ်မှာ ၁၀တန်းအောင်တဲ့အထိပဲ ကျောင်းပညာကို အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်။
ကျနော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အဆိုတော်နဲ့ ခရစ်ယာန်အသင်းအုပ်ဆရာ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူမှန်းသူမှန်း သိတတ်လာ တဲ့အရွယ်ရောက်တော့ ကိုယ့်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေ ပေါ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ကျနော် စဉ်းစားလိုက်တယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးတွေ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအောက်မှာ ကင်းလွတ်အောင် ကိုယ့်လူမျိုးတွေအတွက် ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားရင်းနဲ့ ကရင့်တော်လှန်ရေးထဲဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ ကရင့်တော်လှန်ရေးထဲ ကျနော် ၀င်လိုက်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးထဲမှာ တနှစ်အကြာ ခရိုင်ဥက္ကဌက ကျနော့်ကို ကရင်မျိုးဆက်သစ် သင်တန်းကျောင်းကို ပို့မယ်ဆိုပြီး ကျောင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်၊ လိုက်နာရမဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေကိုပါ ကျနော့်ကို ရှင်းပြခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျနော် ကရင်မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းကို နယ်စပ်တစ်နေရာမှာ တက်ခဲ့ပါတယ်။ ကရင်မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းက တနှစ်နဲ့ ရှစ်လ တက်ရပါတယ်။ အဲဒီကြားထဲမှာ ဗဟုသု တ၊ အတွေ့အကြုံရဖို့အတွက် ကေအဲန်ယူ ထိန်းချုပ်တဲ့ ခရိုင် ၇ခုမှာ Intern (အလုပ်သင်) ၃လ ဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ ကရင်မျိုး ဆက်သစ်ကျောင်းက လူငယ်တွေအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ ကရင့်သမိုင်းအကြောင်းအရာ စသည့်ဘာသာပေါင်းများစွာ သင်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကျောင်းမှာတက်ရင်း အတွေ့အကြုံတွေ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေ ကိုယ့်ကရင်သမိုင်းကြောင်းရာတွေ အများကြီး သိလာတယ်။ ကျနော် ကျောင်းပြီးရင် ကျရာတာဝန်ကို ကျေပြွန် အောင် ထမ်းဆောင်သွားမယ်။
လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံးကို ကျနော်ပြောချင်တာ အခု တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက် လူငယ်တွေ လိုအပ်တယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းဆောင်တွေ ပုခုံးလွဲပြောင်း တာဝန်ပေးဖို့အတွက် လူငယ်တွေ လိုအပ်နေတယ်။ အဲဒါကြောင့် လူငယ်တွေ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသကိုပဲရောက်ရောက် စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ကိုယ် စွမ်းရှိသမျှ ကြိုးစားပြီး လုပ်ဆောင်ကြပါလို့ ကျနော် အဲလိုပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
KNU ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး ကော် မတီကို ဖွဲ့လိုက်ပြီ
နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်။ (ကေအိုင်စီ)
Photo-Nan Paw Gay (ကေအဲန်ယူ ဒုဥက္ကဌ ပဒိုစောဒေးဗစ်သကဘော)
မြန်မာအစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စများ ဆွေးနွေးရန်အတွက် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)က ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင် ရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကေအိုင်စီက စုံစမ်းသိရှိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့မှ ၁၁ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် KNU ၏ အရေးပေါ် အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့ဝင် ၇ဦးပါသည့် အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါကော်မတီတွင် ဥက္ကဌအဖြစ် KNU ဒုဥက္ကဌ ပဒိုစောဒေးဗစ်သကဘော၊ ဒုဥက္ကဌအဖြစ် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူးစေး ဖိုး၊ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ပဒိုစောဒေးဗစ်ထောတို့ဖြစ်ကြပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် နော်စီဖိုးရာစိန်၊ ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးရောဂျာခင်၊ သစ်တောတာဝန်ခံ ပဒိုစောအားတိုးနှင့် ဖားအံခရိုင် ဥက္ကဌ ပဒိုစောအောင်မော်အေးတို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရသစ်နှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံမည့် KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် သွားရောက်မည့် နေ့ရက်များကို ၎င်းအရေးပေါ် အစည်း အဝေးတွင် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်း မရှိသေးသလို နေ့ရက် သတ်မှတ်ခြင်းလည်း မရှိသေးဟု သိရသည်။
သို့သော် ယခု ကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ KNU ခေါင်းဆောင်များကို ကေအိုင်စီက ကြိုးစားဆက်သွယ်နေဆဲ ဖြစ်နေ သဖြင့် အသေးစိတ် အခြေအနေကို မသိရှိရသေးပေ။
KNU သည် ၂၀၀၈ခုနှစ်က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၁၄ကြိမ်မြောက် ညီလာခံမှ ချမှတ်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်း နိုင်ငံရေးပြဿ နာကို နိုင်ငံရေးနည်းအရ တစ်ဆင့်ချင်း ဖြေရှင်းသွားမည့်မူအပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု KNU အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး က ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
လေးရက်ကြာမြင့်သည့် KNU ၏ အရေးပေါ် အစည်းအဝေးသို့ ခရိုင်၊ တပ်မဟာ ၇ခုမှ ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်သည့် ဗဟိုကော် မတီဝင်များနှင့် အရံဗဟိုကော်မတီဝင်များသာ တက်ရောက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
KNU ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီသည် ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်သွားမည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆက်လက်၍ ကြီးကြပ်စီစဉ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၁၀ရက်နေ့က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့တွင် မြန်မာအစိုးရ၏ ဗဟို ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် KNU အတွင်းရေးမှူးချုပ် နော်စီဖိုးရာစိန် ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့တို့ အချိန် ၃နာရီကြာ ပဏာမ တွေ့ဆုံမှုပြုခဲ့သည်ဟု သိရ သည်။
၎င်းတွေ့ဆုံမှုတွင် မြန်မာအစိုးရဘက်မှ မီးရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ တြိဂံတိုင်းမှူး(ငြိမ်း) ဗိုလ်မှူးချုပ်ချစ်သန်း၊ ပညာရှင်များ ဖြစ်ကြသည့် ဒေါက်တာတင်မောင်သန်း၊ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်၊ ဦးလှမောင်ရွှေနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်သည့် ဦးငွေစိုး၊ ဦး တိုနီနှင့် ဦးကိုကိုမောင်တို့ ဇနီးမောင်နှံတို့ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းမတိုင်ခင် ပြည်နယ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ၂ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့မှုမှာ EC ဆုံးဖြတ်ချက် မပါဝင်သဖြင့် တရားမ၀င် ကြောင်း KNU ဒုဥက္ကဌ ပဒိုစောဒေးဗစ်သကဘောက ကေအိုင်စီကို ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ကေအိုင်စီမှ လက်ခံရရှိသည့် သတင်းများအရ ၎င်းတရားမ၀င် တွေ့ဆုံမှုကို ကရင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့် နယ် စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်လွင်က ညွှန်ကြားကာ ဦးစောဖိုးနီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(ငြိမ်း)၊ ဘားအံမြို့။ သိက္ခာတော်ရဆရာတော်ဦးစောရင်မြရွှေ၊ ကော့ကရိတ်မြို့။ အရှင်ခေမာဝုဓ၊ တောရကျောင်းတိုက်၊ မြ၀တီမြို့။ အင်္ဂလီကန် အသင်းတော်လူကြီး ဦးစောဗစ်တာ၊ ဦးတင်အေး၊ ရွှေမြင်းဝန်ဘုရားဂေါပက(မြ၀တီမြို့)နှင့် ဦးစောအယ်ဝါးတို့က တွေ့ဆုံခဲ့ကြ ခြင်းဖြစ်သည်ဟု နယ်စပ်သတင်းများအရ သိရသည်။
Posted by KCA.UK at 10:200comments
KIA မှာ အသုံးပြုခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ ဓာတုလက်နက်အကြောင်း
Tuesday, 01 November 2011 20:58
ကပစထုတ် ၁၂၀- မမ စိန်ပြောင်း
KIA ကို အစိုးရ စစ်တပ်က ဓာတုလက်နက်အသုံးပြုပြီး တိုက်ခိုက်နေကြောင်း KIA နှင့် နီးစပ်သူများက သတင်းတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ ယခုအခါ စစ်ဘက်နီးစပ်သူများက အဲဒီဓာတုလက်နက်တွေအား အသုံးပြုဖို့ ဘယ်သူက ညွှန်ကြားနိုင်သည်ကို ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ သုံးသပ်တင်ပြလာပါတယ်။ ဓါတုလက်နက်များကို ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံဟာ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံတွေသာ ဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုအရာရှိချုပ် (ကကထုတ်) လက်အောက်ခံ ဖြစ်ပါတယ်။ ကကထုတ်ဟာ ကကကြည်းရဲ့ တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာ ရှိပြီး အထူးလျှို့ဝှက်၊ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်အဆင့် သတ်မှတ်ထားကာ တော်ရုံတန်ရုံ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများကပင် ၀င်ရောက်စွက်ဖက် သိရှိပိုင်ခွင့် မရှိကြပေ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်အရာရှိ အငြိမ်းစားတစ်ဦးက အောက်ပါအတိုင်း ပြောပါတယ်။
“နအဖ ခေတ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ် ကျနေတုန်း အင်လျားကန်စောင်း နံဘေးမှာ ရှိတဲ့ ယခင် DI-4 ကပစ(၄) ၀င်းအတွင်းသို့ အတွင်းရေးမှူး(၁) ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်တပည့်တွေ ထောက်လှမ်းရေးက ၀င်ရောက်တဲ့ ကိစ္စအပေါ် ကကကြည်းနဲ့ ကကထုတ်က ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်ဗျ၊ နောက်ပြန်ဆုတ်သွားရတယ်။ ”
KIA ကို ဓါတုလက်နက် အသုံးပြုခွင့်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကကကြည်းမှ ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ အဲဒီသတင်းနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး စစ်ဘက်နီးစပ်သူများက သုံးသပ်ရာမှာ ကကထုတ်ဟာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းရဲ့ အမိန့်ကွပ်ကဲမှု အောက်မှာ ရှိပြီး သူ့ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ဓါတုလက်နက်များကို အသုံးပြုဖို့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ အနိမ့်ဆုံးကတော့ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်း(ညှိ/ကွပ်) ဆီမှ အမိန့်စီးဆင်းရမှာဖြစ်ကြောင်း KIA ကို ဓါတုလက်နက်သုံးခွင့်ပြုဖို့ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် (တပ်ချုပ်) နှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်း (ဒုတပ်ချုပ်)၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်း (ညှိ/ကွပ်) ခွင့်ပြုမှသာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ အသုံးပြုခွင့်ပေးရင်တောင်မှ ခြေလျင်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များမှာ အသုံးပြုတဲ့ စိန်ပြောင်းများတွင် မဟုတ်ဘဲ လက်နက်ကြီးနဲ့ အမြောက်ကြီးများရှိတဲ့ အမြောက်တပ်ရင်းများက ပစ်ခတ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ရင် ပေးတဲ့သူအပေါ် တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်တာကြောင့် မှန်/မမှန်ကိုတော့ အချိန်ယူ စုံစမ်းစစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ဖို့လိုနေကြောင်း စစ်ဘက်နီးစပ်သူများက သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ဒီသတင်းကို အတည်ပြုဖို့ဆိုတာဟာ လုံခြုံရေးတင်းကြပ်တဲ့ ကကကြည်းသို့ အချိန်ယူ လှည့်ပတ်မေးမြန်းမှသာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ဓါတုလက်နက်များ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ကပစ ကတော့ စိန်ပြောင်းကျည်များ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကပစ(၁၂) ဖြစ်ပြီး ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ စိတ်အ၀င်စားဆုံး ဆောင်းပါးအဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာဖို့ ဒီလို စီမံကိန်းတွေ ရှိတယ်ဗျို့ ဆောင်းပါးပါ အချက်အလက်များမှ ကပစ(၁၂) အကြောင်း စစ်ရေးလေ့လာသူများ သုံးသပ်နိုင်ရန် ပြန်လည်ကောက်နှုတ် တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ကပစ (၁၂) က မကွေးတိုင်း၊ သရက်မြို့နယ်၊ စခန်းကြီးကျေးရွာ၊ ပိတောက်ပင်ကျေးရွာတို့၏ တောင်ဘက် ၃ မိုင်ကျော်တွင် ရှိပါတယ်။ ဒီစက်ရုံကို ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအမှတ် ကဖ-၂၆-က-၉၇ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အင်အား (၁၄၄၅) ဦး လျာထားရာ လက်ရှိအင်အား (၄၀၀) ကျော် ရှိပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများမှာ 120mm, 60mm, 105mm, 81mm ကျည်များ ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ မြေဧက (၁၆၀၀၀) ကျော်ရှိပြီး အပိုင်း ၂ ပိုင်းခွဲ၍ နိုင်ငံ ၂ နိုင်ငံရဲ့ အကူအညီနဲ့ တည်ဆောက် တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ ပထမပိုင်းကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဒေ၀ူးကုမ္ပဏီမှ ကျည်ဆန်ကိုယ်ထည်၊ နောက်မြီး ဒလက်များကို တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ပြီး၊ ဒုတိယအပိုင်းကို ၄င်းကျည်ဆန်များ၏ အတွင်းပိုင်း အစပျိုးယမ်းနှင့် ခွင်းယမ်းများကို ချက်ကိုစလို ဗေးကီးယားနိုင်ငံမှ စက်များဝယ်ယူပြီး ၄င်းနိုင်ငံမှ ပညာရှင်များဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ (မှတ်ချက်- ချက်ကိုစလို ဗေးကီးယားနိုင်ငံမှ လက်နက်၊ ကျည်ဆန်လုပ် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ တင်ပို့နေမှုမှာ နေတိုး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် မသတ်မှတ်မီကာလက ပေးပို့ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နေတိုး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်သည့် ကာလမှ ယနေ့ အထိ ၄င်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပေးပို့နိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါ)။ ၄င်းကျည်ထုတ်လုပ်သည့် စက်များမှာ ခေတ်မှီ အီလက်ထရွန်နစ်ထိန်း ကိရိယာများ တပ်ဆင် အသုံးပြုထားသဖြင့် ကပစ (၃) ထက် အဆပေါင်းများစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကပစ (၃) ကတော့ ပဲခူးတိုင်း၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ဆင်တဲစခန်းမှာ ရှိပါတယ်။ မြေဧရိယာ အကျယ်အ၀န်းက ဧက (၃၀၀၀) ကျော်ရှိပြီး စစ်သည်အင်အားက (၉၀၀) ကျော်ရှိပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုကတော့ 120mm, 60mm, 105mm, 81mm, အစရှိတဲ့ ကျည်များဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိထုတ်လုပ်မှုနှုန်းက လစဉ်ပုံမှန် ကျည်တမျိုးစီကို (၄သောင်း) ပတ်ဝန်းကျင်လောက် ထုတ်ပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 23:300comments
Monday, 07 November 2011 17:11 Tun Tun
New Delhi (Mizzima News) – The plan was bold and hush-hush; Code named “Red spider,” the aim of the never-executed operation in 1991 was to free opposition leader Aung San Suu Kyi from house arrest at her lakeside home in Rangoon and spirit her off to set up an alternative government.
A few members of the militant All Burma Students' Democratic Front (ABSDF) and some leaders of armed ethnic forces had planned the clandestine operation to free Suu Kyi, the head ofasmall undergroud group told Mizzima.
Suchaparallel government, they hoped, would drawasignificant number of soldiers to defect from the Burmese army. Their hope was to tip the balance of power away from the military junta. The plan cost them their freedom when was exposed and they were all arrested.
Posted by KCA.UK at 14:130comments
နယ်လှည့်ကျောပိုးအိတ် ကျန်းမာရေးလုပ်သားအဖွဲ့အကြောင်း တစေ့တစောင်း
Posted by KCA.UK at 09:120comments
ယာယီအတိုက်အခိုက်ရပ်စဲသည့်နေ့က ကျဆုံးသော ရဲဘော်သို့
Nyein Wai – နိုဝင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၁
လွန်ခဲ့တဲ့လထဲက အင်တာနက် သတင်းဌာနတစ်ခုမှာ ကချင်ပြည်နယ်ထဲက တိုက်ပွဲတပွဲအကြောင်း ရိုက်ထားတဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗွီဒီယိုကို ကျနော် ကြည့်ရပါတယ်။
မီးစွဲလောင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ကားတစင်း၊ မီးကျွမ်းသွားပြီးဖြစ်တဲ့ နောက်ထပ်ကားတစင်း၊ မီးလောင်ထားတဲ့ကားပေါ်မှာ အစိုးရစစ်တပ်က သေ ဆုံးနေတဲ့စစ်သားတွေ။ သူတို့တကိုယ်လုံး မီးသွေးခဲလိုဖြစ်နေတာ၊ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်သေဆုံးနေကြတာ။ လမ်းဘေးတောစပ်မှာလည်း ဟို တလောင်း သည်တလောင်း။
ပြီးတော့ လက်နောက်ပြန်ကြိုးတုတ်ခံထားရတဲ့ အစိုးရစစ်သား သုံ့ပန်းနှစ်ယောက်။ နောက်ထပ် လက်ရဖမ်းမိထားတဲ့ အစိုးရစစ်တပ် စစ် ဗိုလ်တစ်ဦး။ စစ်ဗိုလ်လုပ်သူက စကားကို ပီပီသသတောင်မှ ပြောမထွက်နိုင်လောက်အောင် ထိတ်လန့်နေတဲ့မျက်နှာ။
ဒီအစိုးရစစ်သားအလောင်းတွေနဲ့ လက်ရဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ် စစ်သားတွေဟာ ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များရဲ့ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်တာခံရတဲ့ သူတွေပါ။ ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များရဲ့လက်မှာကျရောက်သွားတဲ့ အစိုးရစစ်သား သုံ့ပန်းတွေပါ။
ဒီဗီဒိုယိုခွေကို အင်တာနက်ပေါ်တက်လာနိုင်တဲ့လူတိုင်း တွေ့နိုင်ကြမှာပါ။ တခြားကြည့်ရှုခွင့်ရတဲ့သူတွေ ဘယ်လိုခံစားကြရသလဲဆိုတာ မခန့်မှန်းတတ်ပေမယ့် ကျနော်ကတော့ သုံးလေးရက် အဲဒီမြင်ကွင်းတွေကိုပဲ ပြန်ပြန်စဉ်းစားနေမိပြီး မေးခွန်းတချို့ကိုလည်း စိတ်ထဲက အထပ်ထပ်အခါခါ မေးနေမိပါတယ်။
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အခုလို အသေအကြေ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ဖို့အတွက် ဒီစစ်ပွဲဟာ တကယ်ကောလိုအပ်နေသေးလို့လား။ စစ် သားတွေကို စစ်တိုက်ဖို့လွှတ်လိုက်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ အခုလို စစ်သားတွေ စစ်မြေပြင်မှာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် သေဆုံးနေကြရတဲ့ ဒီဗီဒီ ယိုအခွေကိုကြည့်ပြီး ဘယ်လိုခံစားချက်များရှိနေကြပါ့မလဲ။ ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ စစ်သားတွေသေဆုံးစေတဲ့ ဒီနည်းနဲ့ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆီးယူတယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီဆန္ဒဟာ ဘယ်လိုဆန္ဒအမျိုးအစားမျိုးပါလိမ့်။
တခါသေဆုံးသွားကြရတဲ့ စစ်ဗိုလ် စစ်သားတွေရဲ့ ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေက ဒီဗီဒီယိုအခွေကိုကြည့်ပြီး ဘယ်လိုခံစားနေကြရမလည်း။ ဒို့ ခေါင်းဆောင် ဒို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအတွက် ဒို့လင်သားတွေ ဒို့ဖခင်တွေ အခုလိုသေနေကြရတာ ဂုဏ်ယူစရာပါကွာဆိုပြီး လူပုံအလယ်မှာ ဝံ ကြွားနေကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကို တစုံတယောက်ကများတွေးမိရင် အဲဒီလိုတွေးတဲ့လူဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့လူတော့ ဘယ်နည်းနဲ့ မှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုကြရမှာပါ။ ဒီကြားထဲ ဒီကနေ့စစ်သားတွေ သေကြရပြီးနောက်တနေ့ကျတော့ တခါစိတ်ကူးပေါက်ပြီး အပစ်အခတ်ရပ်စဲတဲ့ အလုပ်ကို ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကပဲ ကောက်ခါငင်ကာထလုပ်ချင်လုပ်နေဦးမှာ။ ဒါဆိုရင် အပစ်အခတ်မရပ်စဲခင် သေကြရတဲ့ စစ်သားတွေရဲ့ အဖြစ်ကို ကျနော်တို့ ဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ကြမလဲ။ တကယ့်ကို အမြင် အသိ တိုလွန်း ကန်းလွန်းလှတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက ဒီလို ခေတ်ကြီး မှာ စစ်ပွဲတွေကို အာသာတငမ်းငမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့လည်း ကျနော် မပစ်မှားရက်ပါဘူး။
ဝမ်းနည်းဖို့အကောင်းဆုံးကတော့ စစ်မြေပြင်မှာ လူတွေ၊ စစ်သားတွေ၊ သေကြေ ထိခိုက်နေတဲ့ နေ့စဉ်အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးမှာ တက်ရောက်နေကြတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ အသံခပ်တိုးတိုးလေးပဲ ရှေ့ပြော နောက်ကြည့် အနေ အထားမျိုနဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေးကြရတဲ့အချက်ပါပဲ။
ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ လတ်တလော အရေးအကြီးဆုံးပြဿနာတွေထဲမှာ လူတွေ နေ့တိုင်းသေနေကြရတဲ့ ဒီပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာဟာ တကယ်တော့ နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့လုပ်နေလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် ဒီလွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးဟာ ဒီတိုင်းပြည်မှာ လူတွေအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်နေကြရတဲ့အဖြစ်ကို ရှောင်ကွင်းပြီး ရပ်ကွက်ထဲက ကလေးတွေမုန့်လုစားတဲ့ကိစ္စမျိုးလောက်ကိုပဲ ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ လွှတ်တော် တွေများ ဖြစ်နေသလား။ ကျနော် အဲသလိုလည်း မယုံကြည်ချင်ပါဘူး။
သက်တော်ရှည် ငြိမ်းချမ်းရေးသမား ကဗျာဆရာကြီးဒဂုန်တာရာက ဒီတိုင်းပြည်မှာ စစ်မက်ဖြစ်ပွားမှုတွေ စပ်စဲဖို့ ကြေညာချက်ထုတ်တဲ့အခါ တပ်မတော်ထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမလိုလားတဲ့သူ ရှိမယ်ထင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီစကားကို အခြေခံပြီးစဉ်းစားရင် လက်ရှိစစ်ပွဲတွေ အပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားလာနေတာကိုထောက်တော့ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးရဲ့နောက်မှာ စစ်လိုလားသူ သိန်းငှက်တစ်အုပ် ရှိနေတဲ့သဘောများ လား။ အတော့်ကို စိတ်မချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။
မှန်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံကပြဿနာတွေဟာ တနေ့တည်း တရက်တည်းနဲ့ ဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ မငြင်းပါ ဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိတိုင်းပြည်မှာ အာဏာအရှိဆုံးပုဂိုလ်တွေဟာ ဖြေရှင်းရခက်တဲ့ပြဿနာတွေကို အခုဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေက ပိုပြီး ခက် ခဲရှုပ်ထွေးအောင် လုပ်နေသလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မတွေးမိကြလို့များလား။ ဒီလိုလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့က တိုင်းပြည်ကို နှစ်ပေါင်း ရာစုတဝက်ကျော် အုပ်ချုပ်လာခဲ့ကြသူတွေပဲဟာ။ ဒါဆိုရင် ဘာပြုလို့ ပြည်တွင်းစစ်မီးကို ဓါတ်ဆီထပ်လောင်းနေကြတာများလဲ။ ပိုပြီး စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့အချက်က `ဝ´ လို လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မျိုးကြတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကို ဘေးချိပ်ပြီး နယ်ခြားစောင့် တပ်အသွင်ပြောင်းရေး မလုပ်ခိုင်းတော့ဘူးဆိုပြီး လက်မှတ်ထိုး သဘောတူလို့ရတယ်ဆိုရင် တခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ ကိုလည်း ဘာပြုလို့ အဲသလို ဖြေရှင်းဖို့ မလုပ်နိုင်ကြတာလဲ။ ဘာပြုလို့များ စစ်သားတွေကို သတ်ကွင်းထဲ ဆင်းသွားဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့ကြတာလည်း။ ကျနော် မတွေးချင်လောက်အောင်ကိုပဲ ထိတ်လန့်မိတယ်။ စိုးရိမ်မိတယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ဟာ တကယ့်ကို ကံဆိုးလှပါတယ်။
ခေတ်မမီတော့ပါဘူး။ သဘောထားကွဲတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို စစ်တိုက်ပြီး အညံ့ခံခိုင်းတဲ့လုပ်ရပ်မျိုးကို ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးအတွက် လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဝါဒဖြန့်မှုမျိုးဟာ တကယ့်ကို တန်းမမီလှတော့ပါဘူး။ ဒီလိုအယူအဆ ဒီလိုနည်းဟာ တိုင်းပြည်တခုရဲ့ခေါင်းဆောင် တာဝန်ရှိသူများအဖို့ မကိုင်စွဲသင့်တဲ့ ခပ်တိမ်တိမ် ခပ်တုံးတုံး အယူအဆပါ။ အတွေးအခေါ်တွေနည်းပညာတွေ ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး အခုလို အလျင်အမြန် ခုန်ပျံပေါက်ကွဲထွန်းကားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ ကိုယ့်ရှိတဲ့သေနတ်အစုတ်ကလေး ခါးခြားက ခဏခဏ ထုတ်ချိန်ပြရတာကို ကျေနပ်နေတဲ့ အဲသလိုဒဿနမျိုး အဲသလိုပြဿနာဖြေရှင်းနည်းမျိုးဟာ ပေမီ ဒေါက်မီတဲ့ အလုပ် ကြပ်ပြည့်တဲ့ အလုပ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ ဘယ်ပညာတတ်မဆို သိနေတဲ့ကိစ္စပါ။
ကျနော်ထင်တယ်လေ။ တကယ်တော့ လက်ရှိတိုင်းပြည်မှာ တာဝန်အရှိဆုံးပုဂိုလ်တွေဟာ အခုတိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲဟာ တကယ်ပဲ ပြည် ထောင်စုမပြိုကွဲရေးအတွက် တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲအဖြစ် တကယ်ယုံကြည်လို့ စစ်သားတွေကို စစ်မြေပြင်ဆီလွှတ်နေကြတာ ဟုတ်မယ်မထင် ပါဘူး။ တခြားအကြောင်းတော့ ရှိကိုရှိရပါလိမ့်မယ်။ ဘာပြုလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့က တိုက်သာတိုက်နေရတာ မျက်နှာတော့ တော်တော် ပြောင်ပြောင်ထားပြီး တိုက်နေရတဲ့သဘောက သိသာလွန်းနေလို့ပါ။ ဒီလို အခင်းအကျင်းက နေ့စဉ်လူတွေ သေနေရတဲ့ စစ်ပွဲကြီးတပွဲ တိုက်နေတာကို လွှတ်တော်ရဲ့ကန့်လန့်ကာနောက်မှာ လူတစုက ကြိတ်ဝိုင်းလုပ်ပြီး စစ်မီးမွှေး စစ်မီးအားပေးလုပ်နေတဲ့ အခင်းအကျင်း သဘော ဖြစ်မနေစေဘူးလား။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ဒီအချက်က သူတို့အတွက် အထိမခံရွှေပန်းကန်ကိစ္စမို့ အခုထက်ထိ အစိုးရစစ်တပ် စစ် သားတွေ စစ်မြေပြင်မှာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်သေနေကြရတာ စစ်ပွဲနဲ့နီးတဲ့ဒေသတွေမှာ အရပ်သားတွေကို ရန်သူသဖွယ် ဆက်ဆံအနိုင်ကျင့် နေကြတာကို ဒီအတိုင်း လွှတ်တော်ကြီးက အခြေအနေကြည့်လက်ရှောင်ပြီး အသံတိုးတိုးလေးပဲ ပြောနေကြရတာဖြစ်တယ်လို့ ခန့်မှန်းလို့ ရပါတယ်။
သည့်ထက်ပိုပြီး စိတ်ပူပန်ဖို့ကောင်းတာက အစိုးရက လွှတ်လိုက်တဲ့စစ်သားတွေ အရာရှိတွေကိုယ်တိုင်က ဒီကနေ့ သူတို့တိုက်နေရတဲ့ စစ်ပွဲဟာ ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးအတွက် အချုပ်အချာအာဏာ ကာကွယ်ရေးအတွက် တိုက်ကြရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးအယူအဆကို လက်ခံသဘောပေါက် ယုံကြည်လို့ တိုက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကလေးကအစ သိနေတဲ့အချက်ပါပဲ။ ဒီလို အခိုင်အမာယုံကြည်ပြီး တိုက်နေတဲ့ စစ်ပွဲမဟုတ်လို့လည်း ဘယ်ဗိုလ်ချုပ်ကမှ လွှတ်တော်ရှေ့ထွက်ပြီး သူတို့တိုက်နေတဲ့ စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ သဘောထားတွေကို ရဲရဲတင်းတင်းဝင်မပြောရဲပဲ အသံတိတ်လုပ်နေကြတာပေါ့။ စစ်ဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေ အခြေအနေတွေကို အစိုးရသ တင်းစာတွေမှာ အရိပ်အယောင်တောင်မှမရေးပဲ ဖုံးနေကာနေကြတာပေါ့။ ဒါကဘာကိုပြသလဲဆိုတော့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ သူတို့ဖန်တီးတဲ့ စစ်ပွဲအပေါ် သူတို့ကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံရေးအရ ခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်မှုမရှိလို့ လူတွေရှေ့ထွက်ရပ်ပြီး လက်သီးလက်မောင်းမတန်းရဲတာပဲပေါ့။ ဒါဆိုရင် မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်မရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတခုဟာ ဘယ်ကိုဦးတည်သွားနိုင်သလဲ။ ရှေ့တန်းတွေမှာ အစိုးရ စစ်တပ် စစ်သားတချို့က အရပ်သားတွေအပေါ် လုပ်ကိုင်ဆက်ဆံနေတဲ့ အခြေအနေတွေက အဖြေပေးနေပါပြီ။
(၄၊ ၁၁၊ ၂၀၁၁) နေ့က ဒီကေဘီအေနဲ့ အစိုးရ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ သဘောတူကြပြန်ပါတယ်။ အခြေအနေကိုကြည့်ရတာ ဒီအပစ်အခတ် ရပ်စဲပုံ ရပ်စဲနည်းက ယာယီသဘောများဖြစ်နေမလားလို့လည်း စိတ်ထင့်မိပါတယ်။ ဒီလိုဖြေရှင်းပုံ ဖြေရှင်းနည်းဟာ အချိန်မရွေး သေနတ် သံတွေ ပြန်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဖြေရှင်းနည်း၊ တချိန်ကျရင် သည့်ထက် ကြီးမားတဲ့အင်အားနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ကို ဦးတည်တဲ့ဖြေရှင်းနည်းဆိုရင်တော့ ဒါဟာ တော်တော်လေးကို စိတ်ပူပန်ဖို့ ကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းနည်းပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲလိုက်ကြတာကိုတော့ ကျနော်တို့ မူအားဖြင့် ကြိုဆိုကြရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သည့်ထက် ခပ်စောစောက တည်းက အပစ်အခတ်ရပ်စဲနိုင်ခဲ့ကြရင် ပိုပြီးမကောင်းပေဘူးလား။ နှစ်ဘက်စလုံး ဘယ်စစ်သားမှ သေကြေဒဏ်ရာရတဲ့အဖြစ်က သက်သာ မသွားနိုင်ပေဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ် အစကတည်းက စစ်မတိုက်ပဲ ပြဿနာဖြေရှင်းလို့ရနိုင်ခဲ့ရင် ပိုပြီးမကောင်းပေဘူးလား။ ဘယ်စစ်သား တယောက်တလေမှ မသေမပျောက်စေတဲ့ ဖြေရှင်းပုံ ဖြေရှင်းနည်းဟာ အကောင်းဆုံးနည်း မဟုတ်ပေဘူးလား။
ကျနော်က ကဗျာရေးတဲ့သူပါ။ ကျနော့်မှာ ဒီကိစ္စဝင်ပြောရလောက်အောင် နိုင်ငံရေး စစ်ရေး နယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝမ်းစာမရှိဘူးဆိုတာ ကျနော် ဝန်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ်ကြားနေ မြင်နေရတဲ့ စစ်ပွဲတွေရဲ့ အနိဌာရုံ သတင်းတွေ မြင်ကွင်းတွေက ယဉ်ကျေးမှုရေးနယ်ပယ်က လူသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကျနော့်အဖို့ အခုလိုဝင်ပြောချင်လောက်အောင် လက်ယပ်ခေါ်နေလို့သာ မနေသာလို့ ဝင်ပြောလိုက်ရတာပါ။
ကဗျာရေးတဲ့သူပီပီ ဒီဆောင်းပါးကို ကဗျာတပုဒ်နဲ့ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
မိုးကြိုးသွားထက်လည်း မြန်၏။ လောကဓာတ်တခွင်
ရယ်ကာ မောကာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကာ
ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဘယ်ရဲဘော် တစ်ယောက်မျှ
မကျဆုံးရှာကြသေးမီဖြစ်ခဲ့မူကား အဟောတဝ ကောင်းလေစွ။ ။
(ခရိုအေရှား ကဗျာဆရာ ဂရီဂေါ်ဗီယက်ရဲ့ကဗျာဖြစ်ပါတယ်။ စာပေါင်းစုစာအုပ်၊ အမှတ်(၂) တွင် ပါရှိတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါ တယ်။)
Posted by KCA.UK at 21:370comments
ENC မှ ကြံဖွံအစိုးရကို နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှူ စတင်ရန်ပြော
တိုင်းရင်းသားအရေး တိုးတက်ဖို့ လိုသေးတယ်လို့ ကုလကိုယ်စားလှယ်က ဝေဖန်
အားရစရာ အပိုင်းတွေရှိပေမဲ့ တိုင်းရင်းသား အရေးကိစ္စတွေမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တိုးတက်ဖို့ လိုသေးတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဗီဂျေးနမ်ဘီးယားက ဒီနေ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ခြံဝန်းတွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဗီဂျေးနမ်ဘီးယားက သတင်းထောက်များ၏ မေးမြန်းချက်များကို ဖြေကြားနေစဉ်။
မြန်မာနိုင်ငံ သုံးရက်ကြာ ခရီးစဉ် နောက်ဆုံးနေ့ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှာလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အဲဒီလို ပြောကြားတာလို့ ကိုယ်တိုင် သတင်းသွားယူခဲ့တဲ့ သတင်းထောက် တစ်ဦးက ပြောပြပါတယ်။ မစ္စတာ နမ်ဘီးယားဟာ နေပြည်တော်မှာ အစိုးရ ထိပ်တန်း တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသလို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်မှာ မနေ့ ညနေပိုင်းက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ပြန်လည် မထွက်ခွာခင် မနက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတချို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ UNDP ကုလသမဂ္ဂ အစီအစဉ်ရုံး ပြောခွင့်ရသူ ဦးအေးဝင်းက ပြောပါတယ်။ မစ္စတာ နမ်ဘီးယားဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်က ရောက်ရှိလာတာပါ။ သူ့ခရီးစဉ်ဟာ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်မှာ ပထမဆုံး လာရောက်တဲ့ ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နိုဝင်ဘာလမှာ မစ္စတာ နမ်ဘီးယား မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်လာပြီး အဲဒီတုန်းက စစ်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရော နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်ခါစ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 09:240comments
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အင်အားကြီးငယ် လူမျိုးစုပေါင်း ရာကျော်နှင့် စုပေါင်းဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ထား သော နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဆိုသည်ကို အထူးပြောစရာ လိုမည်မထင်ပါ။
လိုင်ဇာဌာနချုပ်မှ ရှေ့တန်း စစ်မြေပြင်သို့ ထွက်ခွာသွားနေသော KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ(ဓာတ်ပုံ - Jinghpaw Kasa Blog)
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက် နေ့တွင် ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး နောက်မှ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်လာသည်ကို အားလုံး သတိရနေကြပါလိမ့်မည်။
ယနေ့အချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့်“ဗမာတွေအချင်းချင်း ဗမာ့နိုင်ငံရေးကိုပဲ လုပ်နေကြသည် တိုင်းရင်းသားအရေးကို မေ့ နေပြီ”ဟု အသံများ ထွက်လာနေပါသည်။ မကြာသောကာလက ဒုတိယပင်လုံညီလာခံဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သော်လည်း ယနေ့မှေးမှိန် စပြုနေသည်ကို အားမလိုအားမရဖြစ်၍ နေကြသည်ဟုလည်း သိရပါသည်။
တိုင်းရင်းသားနယ်မြေအသီးသီးတွင် အထူးသဖြင့် ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်များ၌ တပ်မတော်၏ ထိုးစစ်ကြောင့်၊ တပ်မတော် သား အချို့ကြောင့် အပြစ်မဲ့အရပ်သူအရပ်သားများ အသတ်ခံရခြင်း၊ မုဒိန်းအကျင့်ခံရခြင်း၊ အရိုက်အနှက်ခံရခြင်း၊ အစား အသောက် ပစ္စည်းများ လုယက်ခံရခြင်း၊ ပေါ်တာအဆွဲခံရခြင်းတို့ ကြုံတွေ့နေကြရ ပါသည်။
အလားတူ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင် တချို့ကလည်း စစ်တပ်နှင့်မသက်ဆိုင်သော အရပ်သူအရပ်သားများ စစ်မှုထမ်း ဟောင်းများကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှုများ ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
ယခုအတိုင်းဆက်၍ အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်များ လျစ်လျူရှုထားမည် ဆိုပါက နောင်တချိန်တွင် လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုမှ သည် နာကျည်းမှုသို့ကူးပြောင်းပြီး သမိုင်းအဆက်ဆက် ဗမာသည် တိုင်းရင်းသားများ၏ ထာဝရရန်သူများ ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။
ဗမာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် ပျိုတိုင်းကြိုက်သည့် နှင်းဆီခိုင် တပ်မတော်ဘဝမှ စုတေပြီးနောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှသည် ယနေ့အထိ အာ ဏာရှင် အဆက်ဆက်၏ လက်အောက်တွင် လိုအပ်သလို စစ်ကျွန်အဖြစ် အသုံးချခံခဲ့ရပါသည်။ အာဏာရှင် ခေတ်အဆက်ဆက် တပ်မတော်အပေါ် ပြည်သူလူထု၏ လေးစားမှု ကြည်ညိုမှုများ လျော့နည်းခဲ့ပြီး အဆိုးဆုံးမှာ အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ လက်ထက်တွင် တပ်မတော်ကို အလုံးစုံပျက်စီးစေရန် ဆောင်ရွက်သွားခဲ့ပါသည်။ အဆိုးဆုံးမှာ စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာကို တပ်မတော် အရာရှိ အရာခံ အကြပ်တပ်သား အားလုံး အဖျက်ဆီးခံလိုက်ရခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ မှသည် အဆင့် အနိမ့်ဆုံးတပ်သားအဆင့်အထိ အာဏာကိုအသုံးပြုပြီး ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာမှုကို အရေးမယူဘဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် စာရေးသူတို့ တပ်မတော်အတွင်းရှိစဉ်မှာပင် တပ်မတော်တွင် အားလုံး “သူခိုးကြီးနှင့် သူခိုးလေး”တွေပဲဟု ဟာသ ဆောင်ပုဒ်တခုထွက်ခဲ့သည်မှာ ယနေ့တိုင်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
ထိုစဉ်ကတည်းက စာရေးသူတို့ အသိုင်းအဝန်းအတွင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရင်တော့ တပ်မတော်လည်းပျက်ပြီ တိုင်းပြည်လဲပျက်ပြီ ဟုမှတ်ချက်စကား ပြောခဲ့ကြပါသည်။
နဝတ ၊ နအဖ လက်ထက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၊ ဝန်ကြီးများ အပါအဝင် တပ်မတော်နှင့် အရပ်ဘက် အဆင့်မြင့်အရာရှိ ကြီးများ၏ လာဘ်စားမှုများ၊ မယားအငယ်များ ထားနေမှုများ၊ သမီးအရွယ် အမျိုးသမီးငယ်များနှင့် ပျော်ပါးနေမှုများ၊ နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၊ ဝန်ကြီးများ၏ မိသားစုဝင်များက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေမှုများ အစရှိသည့် မသမာမှု ပေါင်းစုံကို တာဝန် အရှိဆုံးအထိ တင်ပြခဲ့သော်လည်း တင်ပြသောဌာနအား နှုတ်မိန့်ပေးခဲ့သည်မှာ အဆိုပါကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မတော် ကာ ကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ကြည်း)ရုံး၏ ညွှန်ကြားချက်မရဘဲ စုံးစမ်းခြင်း၊ မေးမြန်းခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း မပြုလုပ်ရဟု အမိန့်ပေးခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက်ပိုင်းတွင် မသမာမှုများကို ကာကွယ် တားဆီးရမည့်သူများနှင့် မသမာမှု ပြုလုပ်ကြသည့် ရာထူးကြီးငယ်များ ပေါင်းသင်း သွားကြပြီး မတရားမှုပေါင်းစုံကို စစ်တပ်နှင့် အရပ်ဘက်အတွင်း လွတ်လပ်သလောက် နီးပါးလုပ်ကြပါတော့သည်။
ပို၍ဆိုးဝါးသည်မှာ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားသော ရှေ့တန်းနယ်မြေများရှိ အရာရှိအရာခံ အကြပ်တပ်သားများကို လွဲမှားသည့် အမိန့် များပေးခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
အရပ်သူ အရပ်သားကို “ရေလို လလို”ဆက်ဆံရမည့်အစား ရန်သူနှင့်တသဘောတည်း “မီးလိုနေလို” ဆက်ဆံခိုင်းစေခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးနှင့် မမွေးဖွားရ သေးသောကလေးပါ မကျန်အောင် အပြစ်မဲ့ အရပ်သူအရပ်သားများအား ရှင်းပစ် သတ် ပစ်ရန် ရှေ့တန်းနယ်မြေများတွင် ကကကြည်း ဟုခေါ်သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ စစ်ဆင်ရေးဌာနမှ လက်အောက်ခံ တပ်မှူးကြီး များအား အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
တပ်မတော်၏ အရေအတွက်မှ အရည်ချင်းသို့ ဆောင်ပုဒ်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီး အရည်အချင်းမလို အရေအတွက်ကိုသာ ဦးစားပေး ၍ အရာရှိစစ်သည် စုဆောင်းခဲ့မှုကြောင့် စစ်တပ်သည် ပြည်သူ့တပ်မဟုတ်ဘဲ ကြေးစားတပ်ဟု ခေါ်ဆိုရမည့် အခြေအနေမျိုး ရောက်ရှိခဲ့ရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ၏ နှုတ်မိန့်ဖြင့် ကလေးပါမကျန် စစ်သားစုဆောင်းခိုင်းခဲ့သည့်အတွက် ယနေ့အချိန်အထိ အဆိုပါကိစ္စကို တပ်မတော်အတွင်း တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် တိတိပပ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု မပြုလုပ်ရဲကြပါ။
အစဉ်အလာ တပ်မတော်နည်းဥပဒေများကို လျစ်လျူရှုပြီး တပ်မတော်အတွင်းသို့ အရွယ်မရောက်သေးသော ကလေးငယ်များ၊ ရာဇဝတ်မှုကျပြီး လွတ်မြောက်လာသော ထောင်ထွက်များ၊ တပ်ပြေးများ၊ အကျင့်စာရိတ္တ မကောင်းသူများကိုပါ စစ်သားအဖြစ် လူ သစ် စုဆောင်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ယနေ့ တပ်မတော်၏ အခြေအနေသည် မည်သည့်အခြေအနေ ရောက်နေပြီ ဆိုသည်ကို ခန့်မှန်း၍ ရနိုင်ပါသည်။
တပ်မတော် အတွင်း စိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်သော အရာရှိအရာခံ အကြပ်တပ်သား အများစု ရှိနေပါသော်လည်း အထက်လူကြီးများ၏ ပေါ်လစီကြောင့် ခေါင်းငုံ့၍ခံနေကြရပါသည်။
ယနေ့ တပ်မတော်သည် စစ်စရိတ်များများသုံးနိုင်ခြင်းနှင့် စစ်သည် အင်အားပေါများလာသော်လည်း စစ်သည် စွမ်းရည်၊ စည်းရုံးရေး စွမ်းရည်၊ အုပ်ချုပ်ရေး စွမ်းရည်များ လုံးဝကျဆင်းနေပြီဆိုသည်ကို မည်သို့မျှ ငြင်း၍မရနိုင်ပါ။
လက်ရှိ ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA)နှင့် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများက စစ်တပ်၏ စွမ်းရည်(၃)ရပ် ကျဆင်းနေခြင်းကို ဖော်ပြနေပါသည်။
တပ်မတော် ဘက်မှ ခြေလျင် တပ်ရင်း(ခလရ) (၄၇) တပ်ရင်းမှူး အဖမ်းခံရခြင်း၊ အရာရှိစစ်သည် ရာနှင့်ချီပြီး ကျဆုံးဒဏ်ရာ ရခြင်း ခလရ(၂၁)၊ (၃၇)၊ (၂၆၀) တပ်ရင်းမှူးများ အထုတ်ခံရခြင်း၊ ခလရ (၅၈)၊ (၄၃၇)တပ်ရင်းမှူးများ ပြင်းထန်စွာ သတိပေးခံရခြင်း အပါအ၀င် ခလရ (၃၈၁)တပ်ရင်း လွယ်ဂျယ်တွင် KIA တပ်များက ဝိုင်းထားခြင်းခံသည်ဟု အတည်ပြုဆဲ သတင်းများအရ သိရပါသည်။
စစ်တပ်အနေဖြင့် ကြွက်မနိုင် ကျီမီးနှင့်ရှို့ဆိုသည့် စကားပုံအတိုင်း အပြစ်မဲ့အရပ်သူအရပ်သားများကို ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်နေသည့် သတင်းများထွက်ပေါ်နေပါသည်။ KIA ဘက်မှလည်း လက်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိနေကြသဖြင့် လက်ရှိအတိုင်း လွှတ်ထားမည်ဆိုပါက ကချင်-ဗမာ မုန်းတီးနာကျည်းမှု အရေးခင်းသဘောမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။
ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး ဆိုသည့် ဒို့တာဝန်အရေး (၃)ပါးကို တစာစာအော်နေသည့် နဝတ၊ နအဖ၊ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ သည် လက်ရှိဖြစ်ပျက် နေသော တိုင်းရင်းသားပြဿနာများကို လျစ်လျူမရှုထားသင့်ဟု မြင်ပါသည်။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆိုရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တဦးတည်းကိုသာ မက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါမှ ပီပြင်သော အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည် ပါသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် “ဝ” ၊ မိုင်းလားအဖွဲ့ကို ပေးသည့်ငြိမ်းချမ်းရေး အခွင့်အရေးမျိုး ကရင်၊ ကချင်၊ ရှမ်း လက်နက်ကိုင်များကို ပေးသင့်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားများသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို အားကိုးယုံကြည်ခဲ့သောကြောင့် ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းရေးကို သဘောတူ ခဲ့ပြီး ပင်လုံစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း ဆိုသည် မူလလက်ရင်း ညီအစ်ကိုရင်းများဖြစ်ခဲ့သည် ဆိုခြင်းကို အစိုးရ အနေဖြင့် မမေ့ရန် သတိပေးလိုသည်။ တိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးသားမှုကို အစိုးရ အဆက်ဆက်မှနိုင်ငံရေးအမြတ် ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့မဖြစ်ရန် အစိုးရဘက်မှ ရိုးသားမှုကိုပြသသည့်အနေဖြင့် ထိုးစစ်များရပ်ဆိုင်းပြီး တိုင်းရင်းသားများကို ငြိမ်းချမ်းရေးစကား ကမ်းလှမ်းသင့်ပါသည်။
လွှတ်တော်အတွင်း၊ အပြင် နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့်လည်း မြစ်ဆုံဆည် ရပ်တံ့ရေးကိစ္စတွင် ပြည်သူလူထုကို စည်းရုံးစွမ်းဆောင်နိုင်သကဲ့သို့ ယနေ့တိုင်းရင်းသားများအရေးကိစ္စ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အစိုးရအားနည်းလမ်း ပေါင်းစုံနှင့် တိုက်တွန်းခြင်း ဖိအားပေး
KIA သည် မြစ်ဆုံဆည်ရပ်တံရေး ကိစ္စကို စတင်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် တရုတ်အစိုးရ နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့၏ ငြိုငြင်မှုကိုခံရပြီး ပြင်း ထန်သော ထိုးစစ်ကို ကချင်တိုင်းရင်းသားများ ခံနေရပါသည်။ သို့ပါ၍ ကျန်တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများအနေဖြင့် ကချင် တိုင်းရင်းသားများအရေး ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်း ပေးသင့်ပါသည်။
ကချင်-ဗမာ လူမျိုးရေး နာကျည်းစိတ်များ သမိုင်းတွင်မကျန်စေရေး မြစ်ဆုံရပ်တံ့ရေး ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်။
(စာရေးသူ အောင်လင်းထွဋ်သည် ဗိုလ်မှူးဟောင်း တဦးဖြစ်သည်။ တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံး၌ သံမှူးကြီး စသည့် တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်၌ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် တောင်းခံခဲ့သည်)
Posted by KCA.UK at 10:020comments